महासंघको नेतृत्वमा जाने गोल्छा परिवारको सपना नै होः शेखर गोल्छा « Clickmandu
महासंघको नेतृत्वमा जाने गोल्छा परिवारको सपना नै होः शेखर गोल्छा
प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७३, आईतवार १७:१४
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा चुनावी रौनक छाएको छ । महासंघको आगामी कार्यकालका लागि चैत अन्तिम साता नेतृत्व छनोट गर्ने गरी साधारणसभा हुँदैछ । बरिष्ठ उपाध्यक्षको औपचारिक उम्मेद्वारी घोषणा गर्न शेखर गोल्छा यतिखेर आफ्ना समर्थकहरुको जम्बो टोलीसहित बुटवल पुगेका छन् ।
बरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार गोल्छाले उम्मेद्वारी घोषणाको लागि बुटबल नै किन रोजे ? कस्तो छ उनको चुनाबी अंक गणित ? उनी बरिष्ठ उपाध्यक्ष बने पछि के कस्ता काम गर्ने योजना बनाएका छन् ? चुनाब जित्ने उनको आधार के हो ? यी र यस्तै समसामयिक विषयमा गोल्छासँग क्लिकमाण्डूका लागि सागर गजुरेलले बुटवलमा गरेको कुराकानी:
उम्मेद्वारी घोषणा गर्न किन बुटवल आउनु भएको ?
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ हाम्रो संस्थापक सदस्य हो । महासंघभित्र पुरानो सदस्यमा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ पर्छ । बुटवलले मेरो नाम घोषणा गर्न चाहन्छ भने मेरो मनोबल बृद्धि गर्ने यो भन्दा महत्वपूर्ण अर्काे अबसर हुँदैनथ्यो । यसको लागि बुटबल उद्योग बाणिज्य संघप्रति म अत्यन्तै आभारी छु । उहाँहरुले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो । बुटवलले मेरो उम्मेद्वारी घोषणा गर्दैछ । जसमा ६० जना जिल्ला नगरका अध्यक्ष सहभागी हुनुहुन्छ । अहिलेको कार्यसमितिका ३० जनाजति सहभागी हुनुहुन्छ ।
चुनावका दौरानमा जिल्ला तथा नगरका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल बाक्लो बनाउनुभएको छ । जिल्ला–नगरको समस्या के देख्नुभयो ?
जिल्लाका साथीहरुले मुख्यरुपमा नीतिगत बिषयका कुरा गर्नुहुन्छ । अहिले मुख्यरुपमा ब्याजदरको कुरा हो । त्यस्तै, कर सम्बन्धी धेरै कुरा छन् । स्थानीय समस्या छन् । सम्भावना भएपनि लगानीकर्ता नपाउने खालका समस्या छन् । केन्द्रसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको छैन । सचिवालय कमजोर भएको कारण यस्तो भएको हो ।
मेरो सपना परिवारले पनि देखेको छ । महासंघमा मेरो परिवारले पनि ठूलो योगदान दिएको छ । जिल्लामा पनि हामीले धेरै काम गरेका छौं । त्यो हुँदा महासंघको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने लागेर चुनावमा उठेको हूँ ।
तपाईंको चुनाबीसभालाई घोषणा गर्न ६० जिल्लाबाट अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरु बुटवल आएका छन् । राजनीति भएजस्तै देखियो नि ?
यसले महासंघ शसक्त हुँदै गएको देखाएको छ । मलाई विश्वास छ,- महासंघमा चुनाव पक्का छ । राम्रो र नैतिक हुने गरी चुनाव गर्ने हो ।
तपाईंलाई भोट किन दिने ?
मैले ३/४ वटा कारण भन्छु । म २ दशकदेखि चेम्बर अभियानमा लागेको छु । अर्को पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि हो ।महासंघको पहिलो तदर्थ समिति बनेको थियो । यसमा मेरो बुवा पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । उहाँले महासंघको पहिलो विधान बनाउनु भएको थियो । बुवाले महासंघको नेतृत्व गर्न चाहनु भएको थियो । तर, स्वास्थ्यको कारण पुरा हुन सकेन । त्यसपछि दीवाकर दाई, महेन्द्र दाईले पनि महासंघको नेतृत्व गर्न चाहनु भएको थियो । तर, केही कारणले उहाँहरुले नेतृत्व गर्न सक्नु भएन । मेरो सपना परिवारले पनि देखेको छ । महासंघमा मेरो परिवारले पनि ठूलो योगदान दिएको छ । जिल्लामा पनि हामीले धेरै काम गरेका छौं । त्यो हुँदा महासंघको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने लागेर चुनावमा उठेको हूँ ।
चुनाव जितेपछि तपार्इंले गर्ने काम चैं के हो नि ?
हाम्रो अध्यक्ष भवानी राणा बन्दै हुनुहुन्छ । मेरो पहिलो काम अध्यक्षलाई सहयोग गर्ने हो । अर्को सचिवालय सुधार गर्ने हो । यसबाट जिल्लाका समस्याहरु समाधान गर्न सकिन्छ । राम्रो सचिवालय भयो यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ ।
अर्को मैले देश विदेशका एनजिओ र तथा उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने हो । लगानीको सम्भावनालाई खोज्ने मेरो लक्ष्य छ । जुन काम विगतदेखि नै मैले गरेको छु । नेपालमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरु बन्दैछ । यसलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउनु पर्ने छ ।
बिजनेश बढाउने होडबाजीले बैंकिङमा ‘स्ट्रेस’ देखिएको हो, सांग्रिला अब टिक्छ
दुई दशकअघि हिमालयन बैंकबाट बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका सुयोग श्रेष्ठ अहिले सांग्रिला डेभलपमेन्टका बैंकको प्रमुख
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई असफल भन्न मिल्दैन
सामाजिक सुरक्षा कोषको औपचारिक शुरुवात भएको मंसिर ११ गते तीन वर्ष पुगेर ४ वर्षमा प्रवेश